​जान्नुहोस् जमराको सेवन स्वास्थ्यका लागि कत्तिको फाइदाजनाक ?
​जान्नुहोस् जमराको सेवन स्वास्थ्यका लागि कत्तिको फाइदाजनाक ?
बुधबार ११, असोज २०७४
हिन्दूहरुको महान् चाँड बडा दशैँको आज सातौ दिन घर घरमा फूलपाती भित्र्याएर मनाइदै छ । जमरा राखिएको पूजा कोठामा फूलपाती भित्र्याएसँगै दशैको रौनक बढे्र जान्छ ।
दशैँमा मान्यजनको हातबाट आशिर्वाद लिएसँगसँगै जमरा पनि लगाउने गरिन्छ । दशैँमा पहेलो जमारा लगाइन्छ जुन धार्मिक महत्व र विश्वाससँग जोडिएको छ । जमरा शिरमा लगाइनुको आफ्नै धार्मिक महत्व भए ता पनि यसमा औषधीय गुणसमेत रहेको छ । जमरा एउटा महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधिसमेत हो जसले स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदा पुर्याउँछ ।
विशेषत जमराको रुपमा जौं, गहु राख्ने गरिन्छ । १० दिनमा तयार हुने गहुँ, जौं लगायतका अन्नको अंकुरको प्रयोग अत्यन्तै फाइदाजनक समेत छ । जमारामा पौष्टिक देखि अन्य तत्वहरु पाइन्छन् जो स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक छ ।
जमराको जुस तीतो नहुँने र यसमा पौष्टिक तत्व समेत पाइने भएकाले यसको प्रयोग जुसको रूपमा गर्र्न सकिन्छ । यसमा अर्गानिक र सोडियाम हुने भएकोले जलवियोजनको समस्या भएकाहरुलाई निकै फाइदा गर्छ । प्रत्येक एक ग्राम जौंका जमरामा ७७५ मिलिग्राम अर्गानिक सोडियम हुन्छ । यसले रक्त प्रवाहमा हुने क्याल्सियामलाई रगतसँग घुलिएर वग्न मद्दत गर्छ । यसले शरीरका जोर्नीहरुमा जम्मा हुने क्याल्सियमलाई घोल्न मद्दत गरी नसाहरु सन्तुलित राख्छ ।
अमेरिकाको विज्ञान प्रविधि स्रोत अनुसन्धान संस्थाले गरेको अनुसन्धानअनुसार यसमा भिटामिन, खनिज, क्लोरोफिल हुन्छ । यसमा गाईको दूधमा भन्दा ३० गुना बढी भिटामिन बि, तथा पालुङ्गोको भन्दा ३ दशमलव ३ गुना भिटामिन पाइन्छ । त्यस्तै ६ दशमलव ५ गुनावेसी क्यारोटिन, ५ गुना बढी आइरन पाइन्छ । त्यस्तै गाईको दूधमा भन्दा ११ गुना बढी क्याल्सियम, सुन्तलामा भन्दा ७ गुना बढी भिटामिन पाइन्छ ।
जमरा उमारेर नियमित रुपमा त्यसको रस पिउँदा निकै लाभ मिल्छ । किनभने यसमा पोषक तत्व पाइन्छ, जसमध्ये क्लोरोफिल अधिक हुन्छ । त्यसका साथै गहुँको जमरा प्रोटिन, भिटामिन, फाइबर, क्याल्सियम र कार्बोहाइड्रेट्सको राम्रो स्रोत हो ।
जमराको जुस सेवन गर्नाले स्वास्थ्यमा निकै फाइदा गर्छ । खासगरी मुख तथा दाँतसम्बन्धी समस्या हटाउन, रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रित गर्न, पाचन यन्त्र बलियो बनाउन, कलेजोलाई स्वस्थ्य राख्न गहुँको जमरा उपयोगी हुन्छ । त्यसका साथै कतिपय छालाको समस्या र केसको समस्यामा पनि गहुँको जमरा लाभदायक हुन्छ ।
गहुँको जमरा त्यसै चपाएर पनि सेवन गर्न सकिन्छ । साथै यसबाट रस निकालेर पिउन पनि सकिन्छ । गहुँको जमराको जुस बनाएर पिउँदा स्वादिलो हुन्छ ।
जमाराको जुसको उपयोगिता
आठदेखि दश वटा गहुँको जमरा जरामै काटेर राम्ररी धुने अनि यसलाई कुटेर रस निकाल्ने ।
अब एक सफा कपडामा त्यसलाई राख्ने र निचोर्ने । निचोरेको रस कुनै गिलासमा राख्ने ।
यदि तपाई कुनै रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने दिनमा दुई पटकसम्म तीसदेखि पचास एमएल जुस पिउनुहोस् ।
जमारा दशैंको बेलामा मात्र उमार्नुपर्छ भन्ने छैन । स्वास्थ्यका हिसावले यति धेरै फाइदा पुग्ने भएपछि त जमारा सधै उमारेर यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसकालागि घामको किरण नपर्ने स्थानको प्रयोग जरुरी छ ।